Inona no atao hoe marika?
Talata, Jona 5, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny American Marketing Association (AMA) mamaritra ny marika Mitovy amin'ny anarana, teny, famolavolana, marika na endri-javatra hafa izay mamaritra ny tsara na ny serivisy an'ny mpivarotra iray miavaka amin'ny an'ny mpivarotra hafa.
Sarotra ny mahita fanontaniana izay tsotra kokoa: iza ianao? Fa maninona no misy ny orinasanao? Inona no mampiavaka anao amin'ny fifaninanana? Ary na izany aza, ireo no sasany amin'ireo fanontaniana sarotra valiana amin'ny orinasa. Noho ny antony tsara koa. Mitokona ao am-pon'ny orinasa iray izy ireo, ny soatoavina ifotony ary ny tanjona fototra. Ary ny fisiany eo amin'ny tsenan'ny fifaninanana.
Ireo olona ao amin'ny Godfrey atambatra ity sary mivaingana mahafinaritra ity amin'ny marika:
Azonao atao ny misintona ny kopian'ny PDF Branding vita eto.
Tags: marikamarika voafaritrafamaritana marikaGodfreysary infographicinona ny marika